”Xitaa gudaha Maraykanka idinkuma cafin doonno!” – Iiraan oo sheegtay inay u aargudayso Qasem Soleimani oo la diley maanta oo kale | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Xitaa gudaha Maraykanka idinkuma cafin doonno!” – Iiraan oo sheegtay inay u...
”Xitaa gudaha Maraykanka idinkuma cafin doonno!” – Iiraan oo sheegtay inay u aargudayso Qasem Soleimani oo la diley maanta oo kale
(Tehraan) 03 Jan 2021 – Esmail Ghaani, taliyaha Ciidanka Quddus ee ka tirsan Ilaalada Jamhuuriga Iiraan (IRGC), ayaa ku gooddiyey inay u aargudi doonaan Qasem Soleimani oo ay Maraykanku khaarajiyeen maanta oo kale sanad kahor.
Dilkan ay Washington u gaysatey Soleimani oo lagu duqeeyey agagaarka Garoonka Baghdad International Airport oo uu markaa kasoo degey, ayaa waxaa ka dhashay inay maalmo yar kaddib ay Iiraan duqayso 2 xero oo ay Ciidanka Maraykanku ku leeyihiin Ciraaq, waloow aanay wax wayni ku gaarin Maraykanka oo ay isla Iiraan usii digtey sida ay xogaha qaar sheegayaan.
Previous article”Hadda sidii hore waa ka xoog badan nahay!” – Garabyada Falastiin oo sameeyey dhoollatus ”midaysan”
Next articleTOOS u daawo: Inter Milan vs Crotone – LIVE (Shaxda Sugan)